Umlingiswa: Sanae (Patty), ovela kuChampions | Izincwadi Zamanje
Umlingiswa: Sanae (Patty), osuka kuChampions
Umlingiswa wanamuhla, futhi bekuvele kudlala, kuzoba intombazane. Ingabe mayelana Sanae Nakazawa, of UCaptain Tsubasa, noma yini efanayo (awu, cha, kepha yindlela eyaziwa kangcono ngayo kulawa mazwe), Pattykwe Abanqobi. Intombazane eyayithandana no-Oliver (Tsubasa) futhi owaqala waba ngumlandeli wokuqala weqembu lakhe ukuvela ngokuzayo kuze kube ... kahle, ake sikubone.
Umlingiswa ongakhohlwa, akunjalo? Kusukela lapho iqembu lalibizwa ngokuthi iNewpi (kwi-anime) kuze kube yilapho igama lalo lishintshela kuThimba Elisha lapho abadlali bese bevele besesikoleni samabanga aphakeme, uPatty (noma uSanae) wayehlala njalo esezansi komhosha, esiza iqembu lakhe kusuka eziteshini kuya eHe wamemeza eveza obala, yize kamuva wagxila kakhulu kukaputeni wakhe, ekuqaleni angazange amgwinye kepha ngubani, njengoba sazi, wagcina esengene othandweni.
Kamuva, esigabeni sesibili esisishilo, umlingiswa wavela, wasuka kumlandeli osangene futhi onemizwa, owesilisa imodish, imnandi futhi ingeyabesifazane ngaphezulu Umphathi weqembu, okwakumele ancintisane nothando luka-Oliver, yize wayengazi ngempela ngakho konke lokhu, no-Eva (Kumi), omunye umphathi weThimba Elisha.
Ngeke kuthathe isikhathi eside ukuthola lokho ayekufuna, ngoba ekugcineni kwe- UCaptain Tsubasa: World Youth, imanga yesibili, eyashicilelwa kusukela ngo-1994 kuya ku-1997, u-Oliver wazibika kuye futhi kwaphela ukushada. Yebo, kungaba umqashi, kepha njengoba wonke umsebenzi ungasifinyelelanga lapha, futhi ngeke usifinyelele, nakanjani abalandeli be UCaptain Tsubasa ubuvele wazi. Njengoba kufanele wazi nokuthi kumanga UCaptain Tsubasa: Golden 23 (2005-2008) besivele sikhona ukhulelwe.
Ngabe izingane zikaPatty no-Oliver, zizobizwa UHayate y UDaibu futhi kubonwe kukholi ekhethekile yeminyaka ukuthi wayeyisibikezelo sekusasa, enhle njengoyise? Asazi, mhlawumbe uMaster Takahashi uwasebenzisa kumthamo we-gazillion wochungechunge, kepha bayaqiniseka ukuthi banesibindi njengabazali babo ababili.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Umlingiswa: Sanae (Patty), osuka kuChampions
U-Ertito Montana kusho
Kwenzekeni kubo bonke labo bantu, bathole izifo ezithile ezikhubaza imizimba yabo, hehehe
Phendula u-Ertito Montana
Kuyamangaza, kulelo manga zonke zinwebekile, u-Oliver ubukeka njengoSlenderman.
I-anime ehamba phambili phakathi kuka-2000 no-2010
Namuhla isiqalile iBarcelona Comic Fair